ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျေးဇူးကို သိတတ်သော ပြည်သူမှန်သမျှ ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဟု သီတဂူဆရာတော် မ?? - Yangon Media Group
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး၏ကျေးဇူးကို သိတတ်သော တိုင်းသူ ပြည်သားမှန်သမျှ ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဟု သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဥာဏိဿရက မိန့်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့ သစ်(မြောက်ပိုင်း )မြို့နယ်ရှိ ”ပင်လုံရင်ပြင်” သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်အနီး ဘေလီတံတားအဆင်းတွင် ငွေကျပ် သိန်း ၇ဝဝ ခန့်ကုန်ကျသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်တုဖွင့်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းကြေးရုပ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် သီတဂူဆရာတော်က အထက်ပါအတိုင်းမိန့်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နှစ်နှစ်ကာကာ နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ဗိသုကာတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူး တွေကို နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတချို့ ကြောင့်၊ တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ဖုံးကွယ်ထားတာ၊ မေ့လျော့ထားတာတွေ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာဖြစ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘုန်း ကြီးတို့နိုင်ငံမျိုးမှာပေါ့။ တော် တော်ကြာကြာ ဒီအဖြစ်ဟာရှိခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို နိုင်ငံရေးဗိသုကာ၊ လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာတစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ တိုင်းသူပြည်သားမှန်သမျှ ဘယ် တော့မှမဆင်းရဲဘူး”ဟု သီတဂူဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။ ကြေးရုပ်တု၏အလေးချိန်မှာ ကြေးပိဿာချိန် ၃ဝဝ ရှိပြီး ကိုးပေ ခန့်မြင့်ကာ စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ မှာ ခန့်မှန်းကျပ်သိန်း ၇ဝဝ ခန့်ရှိ ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ဖြစ် မြောက်ရေးအဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ ဒဂုံမြို့ သစ်(မြောက်ပိုင်း) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတက်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။
ကြေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် ပြည်သူများကလှူဒါန်းခြင်းဖြစ် ကြောင်းလည်းသိရသည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါကြေးရုပ်အနားတစ်ဝိုက်၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံအကူညီတောင်း ပြီးလုံခြုံရေးချထားကြောင်း ဦးတက်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။ ”ကြေးရုပ်ဖျက်ဆီးခြင်း မခံရ အောင်လည်း လောလောဆယ်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အကူအညီတောင်းထားပါတယ်။ ကြေးရုပ်ကော်မတီကနေပြီး ရုပ်တုအနီးနားမှာ အ ဆောင်လေး ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကြေးရုပ်ရဲ့ သန့်ရှင်းရေးကအစ အလှူရှင် တွေနဲ့ရော၊ ကျွန်တော်တို့ကရော အပတ်စဉ်တာဝန်ယူပြီး လုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြော သည်။ ယင်းပွဲသို့ သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဥာဏိဿရနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း အပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်သူများတက် ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် CITF အဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံ
ဆာရီ၏ နေရာတွင် အန်စလော့တီ ကို နာပိုလီ ပြောင်းလဲ ခန့်အပ်၊ အန်စလော့တီကြောင့် ချဲလ်ဆီးသို့ ဆာရ
လာ့စ်ဗီးဂတ်မှာ အခြေချတော့မယ့် ဂျက်နက်ဂျက်ဆင်
တရုတ်နိုင်ငံသို့ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ထောပတ်သီးများ တင်ပို့နိုင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ AQSIQ အဖွဲ??